Praiminisitra Ntsay Christian: “Atsaharo ny toetranareo mpiasam-panjakana mampahory vahoaka…” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Atsaharo ny toetranareo mpiasam-panjakana mampahory vahoaka…”
Nantsinkafony ambony ambany. Tahaka ny efa nambarany tany avaratry ny Nosy ihany koa ny nolazain’ny Praiminisitra Ntsay Christian tany Betroka. Nitarika dinikasa ny tenany tamin’izany, nanoloana ireo mpiasam-panjakana any an-toerana. “Ilaina ny fandraisana andraikitra sy ny finiavana amin’ny fanompoana vahoaka. Atsaharo ny toetranareo mpiasam-panjakana mampahory vahoaka”, hoy izy. Notsiahiviny fa efa ametraka fanamby tsy maintsy hanovana ny tantara izao fitondrana izao … Nohitsiny fa manararaotra ny fahantran’ny vahoaka ireo sokajin’olona ireo na efa misy olom-boafidy aza. “Natao ho vahaolana ianareo mpiasam-panjakana fa tsy tokony ho olana. Matoa manjaka ny tsy fandriampahalamena, ny asan-dahalo sy ny jiolahy, noho ny asam-panjakana izany. Tsy mandeha amin’ny tokony ho izy”, hoy ihany izy. Nampitandrina anefa ny tenany fa horaisina ny fepetra manoloana izany rehetra izany.
Etsy an-daniny, notsiahivin’ny minisitry ny Atitany, Razafimahefa Tianarivelo, tamin’izao dinikasa izao fa tafiditra amin’ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana ny fanendrena ny governora.
Fametrahana ny faritra faha-23…
Nanteriny koa fa misy lalàna mifehy ny momba ireo mpiasan’ny kaominina, anisan’ny maha be resaka amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny etsy Ambohidratrimo. “Misy lalàna tsy maintsy arahina amin’ny fanesorana sy fampidirana mpiasa ary tokony hijanona hatreo ny disadisa politika. Maika ny fampandrosoana… Zon’ny ben’ny Tanàna tanteraka ny mametraka ny lefiny… Ho an’ny mpiasan kaominina kosa, misy ny fifanarahana na mpiasa maharitra na tsia”, hoy izy.
Natsidiny koa fa ho avy ny fametrahana faritra faha-23 sy ny resaka governora, eo amin’i Vatovavy sy i Fitovinany. Na izany aza anefa, nambarany fa tsy azo ihazakazahana izany. “Efa anaty veliranon’ny filoha io faritra io, saingy misy ny an-tanan-tohatra. Anisan’izany ny dingana fanadihadiana ifotony ary entina amin’ny filankevitry ny governemanta sy ny filankevitry ny minisitra avy eo. Alefa any amin’ny parlemanta vao ara-dalàna izany…”, hoy ihany ny minisitra.